Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo irra gahanii jiru. Oromia Shall be Free |
bilisummaa October 30, 2019	Comments Off on Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo irra gahanii jiru.
Keewwata 3: Sabboonummaa Oromo
4.3. Jijjiiramni kun ce’uufi itituu kan danda’u bifa dhaabbatummaa (institutionalized) yoo qabaateefi uummata keenya gara dakaa jiru bira yoo gahe dha. Jijjiiramichi akka lafa qabatu, darbees akka ce’uuf humna tokko taanee waliin dhaabbannee ni hojjanna. Hojii mootummaan gama kanaan hojjatus ni deggarra. Keessaayyuu jijjiiramichi caasaa mootummaa hundaa bira akka gahu, keessattuu gara caasaa dakaatti akka bu’uu ni deggarra. Uummannis jijjiiramicha lafa qabsiisuuf itti fufiinsaan akka deggaru gama keenyaan waan nurraa eegamu ni baana.
Keewwata 5: Nagaa, Tasgabbii fi Ol’aantummaa Seeraa
Ce’umsa kana milkeessuufis ta’ee jijjiiramicha haala waaraa ta’een dhugoomsuuf nagaa fi tasgabbiin sadarkaa naannoofi biyyaatti jiraachuun isaa dhimma murteessaa ta’a. Hojii nagaa buusuufi ol’aantummaa seeraa kabajuufi kabachiisuu dhimma dursa argachuu qabu ta’uu ni hubanna. Bu’ura kanaan:
5.2. Nuti JSOs sochii siyaasaa taasisnu keessatti ol’aantummaa seera kabajnee socho’uuf
dirqama akka qabnu ni hubanna. Bakka ol’aantummaan seeraa cabee argamettis itti gaafatamummaan akka mirkannaa’uuf ni tumsina.
Keewwata 6: Ol’aantummaa Heeraa
Keewwata 7: Sirna Federaalizimiifi Dimookiraasii
Keewwata 9: Oromoo Gama Hundaan Aangessuu
11.4. Sababa babbal’ina magaalotaafi investimentiitiin kanaan dura ummata qabiyyee isaanii irraa buqqa’aniif kaffaltiin beenyaa kaffalame madaalawaa akka hin taane ni amanna. Ummatni sababa kanaan buqqaa’anis maatii isaanii waliin bittinnaa’anii jireenya gadadoo keessa jiru. Kanaaf lammiileen sababa kanaan miidhaman bifa amansiisaa ta’een akka deebi’anii jireenya isaan jaarataniif ni hojjanna. Gara fuulduraas imaammanni misoomaa, guddina magaalaafi fayyadama lafaa hirmannaa, fayyadamummaa qonnaan bulaa jiddu galeessa godhate akka ta’u ni qabsoofna.
11.5. Finfinneen Magaalaa gudditti Oromiyaafi teessoo mootummaa Itoophiyaati. Kana raggaasisuuf tokkummaan dhaabbannee ni hojjenna.
Maqaa Jaarmiyaalee Siyaasaa Mallattoo Guyyaa
Previous Settler Colonial (Neftenga Safaris) Abyssinia is structural, not an Event
Next OPDO abdachuu fi sobamanii jalatti of dagachuun akka ofiin of balleessuu (suicide)tti laalamuu qaba.